mm News Blog
Search...	အချိန် ရှားပါးလာသူများ အတွက် တစ်နေရာတည်းတွင် စုစည်းထားသော သတင်းပေါင်းစုံ အကျဉ်းချုပ်
ကမ္ဘာ့လွှမ်းမိုးမှု အရှိဆုံး အမျိုးသမီး (၁၀၀)
Created: 30 May 2014	by Myanmar News Blog	ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၂၈ ရက်နေ့က ကမ္ဘာကျော် Forbes မဂ္ဂဇင်းက နေပြီးသော ကမ္ဘာ့ လွှမ်းမိုးမှု အရှိဆုံး အမျိုးသမီး (၁၀၀) ဦးကို ရွေးထုတ် ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုတော့ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ အနုပညာ အသိုင်းအဝိုင်း၊ မီဒီယာကဏ္ဍ စသည်တို့မှ ရွေးထုတ်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ နံပါတ် ၁ နေရာမှာတော့ ဂျာမနီ နိုင်ငံမှ မာကယ် က ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ ဒီစာရင်းထဲမှာ အဆင့် (၆၁) နေရာက ပါဝင် ခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။	Mr Bean မှ ကားသမားအသက်အား ကယ်ဆယ်လိုက်
Created: 29 May 2014	by Myanmar News Blog	ကမ္ဘာကျော် ဟာသ သရုပ်ဆောင် Mr Bean မှာ အရှိန်လွန်ပြီး လမ်းဘေး သစ်ပင်နှင့် တိုက်မိသူ McLaren F1 ကား မောင်းနှင်သူ တစ်ယောက်အား ဝင်ရောက် ကူညီ ကယ်ဆယ် ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထိုကားမောင်းသူ အား ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ရန် ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် တင်ဆောင် သွားပြီး နောက်မှသာ Mr Bean သည် လိုရာ ခရီးသို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာ သွားခဲ့ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ၎င်းပိုင်ဆိုင်သော McLaren F1 မှာ ယင်းနည်းတူ လမ်းဘေး သစ်ပင်အား တိုက်မိ ခဲ့ဖူးကြောင်း၊ ထိုအချိန်က Mr Bean အနေဖြင့် ဒဏ်ရာ အနည်းငယ်သာ ရရှိခဲ့သော်လည်း ကားပြင်ခမှာမူ ကမ္ဘာ့ စံချိန်တင် ပေါင် ၉၁၀၀၀၀ ကုန်ကျ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။	တရုတ်နိုင်ငံက တန်းစီနေကြတဲ့ လူသားများ
Created: 28 May 2014	by Myanmar News Blog	ဒီ ... တန်းစီလို့ နေကြတဲ့ လူအုပ်ကြီး ကတော့ဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ ဘေကျင်းက မြေအောက် ရထား ဘူတာရုံ တစ်ခုမှာ တန်းစီ နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၂၂ က တရုတ်မှာ လူ ၃၁ ယောက် သေဆုံးခဲ့တဲ့ တိုက်ခိုက်မှု အပြီး တရုတ်နိုင်ငံမှာ လုံခြုံရေးတွေ တင်းကြပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဟာကတော့ မြေအောက် ရထားလိုင်းမှာ လုံခြုံရေး တင်းကြပ်ထားမှု မြင်ကွင်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။	တောင်ကိုရီးယားဆေးရုံ မီးလောင်
Created: 28 May 2014	by Myanmar News Blog	တောင် ကိုရီးယား နိုင်ငံမှ ဆေးရုံ တစ်ရုံတွင် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွား ခဲ့ရာ လူနာ (၂၀) ယောက်နှင့် သူနာပြု (၁) ယောက် သေဆုံး ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ အချိန်တွင် ဆေးရုံ၌ လူနာ (၃၃) ယောက်နှင့် သူနာပြု (၁) ယောက် ရှိနေ ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရပါသည်။	၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလား ပိုစတာများ
Created: 28 May 2014	by Myanmar News Blog	ဘရာဇီး နိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် ကျင်းပတော့မယ့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲကြီးဟာ ဆိုရင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နီးကပ်လို့ လာခဲ့ပါပြီ။ ဒီလို အခါမျိုးမှာ ဘရာဇီး အနုပညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ Cristiano Siqueira ကနေပြီးတော့ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲဝင်ကြမယ့် နိုင်ငံအသင်း ၃၂ သင်းအတွက် ကမ္ဘာ့ဖလား ပိုစတာများကို ရေးဆွဲလို့ ပေးခဲ့ပါတယ်။	"Godzilla" လား? "Fatzilla" လား?
Created: 26 May 2014	by Myanmar News Blog	ယခုအခါ ရုံတင် ပြသနေတဲ့ "Godzilla" ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်တဲ့ သတ္တဝါကြီး အပေါ်ကို ဂျပန်နိုင်ငံ ပရိသတ် အချို့က ဝေဖန်လျက် ရှိပါတယ်။ ယခင် ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှာ ပြသခဲ့တဲ့ "Godzilla" ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်တဲ့ သတ္တဝါကြီးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပါက ယခု ဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်သော သတ္တဝါကြီးမှာ ပိုပြီး "ဝ"နေကြောင်း ဝေဖန်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ "Godzilla" အစား "Fatzilla" အဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ပရိသတ် တစ်ယောက်မှ ဝေဖန် လိုက်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။	"The" တစ်လုံး ဒေါ်လာ ၃၇၀၀၀
Created: 26 May 2014	by Myanmar News Blog	ကမ္ဘာကျော် အွန်လိုင်း အရောင်းအဝယ် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြီး eBay ပေါ်မှာ သြဇီသား တစ်ယောက်ဟာ "The" ဆိုတဲ့ လက်ရေး စာရွက် အပိုင်းလေး တစ်ခုကို ရောင်းချ ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ "The" ကို A4 စာရွက် အပိုင်းလေး ပေါ်မှာ အပြာရောင် ဘော်လ်ပင်နဲ့ ရေးသားပြီး ရောင်းချခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်းချသူက ဆိုပါသေးတယ်။ "The" တစ်လုံးနဲ့ မြောက်မြားစွာသော စာကြောင်းများကို ရေးသား နိုင်ပါသတဲ့။ ဒါကို ဒေါ်လာ ၃၇၀၀၀ ဝန်းကျင်နဲ့ ဝယ်ယူ သွားခဲ့ပါတယ်။	၂ နှစ်ကြာ ရေအောက်နစ်မြုပ်ခဲ့သော ကင်မရာမှ ပုံများ အကောင်းအတိုင်း ရရှိခဲ့
Created: 26 May 2014	by Myanmar News Blog	၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း အဆိုတော် တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ Burgoyne ဟာ Vancouver ကျွန်းအတွင်း ခရီးသွားလာရာမှ လှေမှောက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ သူ့မှာ ပါလာတဲ့ ကင်မရာတစ်လုံး ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကင်မရာ ထဲမှာ မိသားစု အစုံအညီ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံများလည်း ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် အရောက်မှာတော့ ရေငုပ် သမား တစ်ယောက်က ဒီကင်မရာကို ရေအောက်မှာ ပြန်လည် တွေ့ရှိခဲ့ရာမှ ကင်မရာ အတွင်း ပါရှိတဲ့ Memory Card ထဲမှာ ဓာတ်ပုံတွေ အကောင်းအတိုင်း ရရှိ ခဲ့ရာက အစပြုလို့ ၂ နှစ်ကြာ ရေအောက်မှာ နစ်မြုပ် နေခဲ့တဲ့ ကင်မရာဟာ ပိုင်ရှင် ဖြစ်သူထံ ပြန်လည်လို့ ရောက်ရှိ ခဲ့ပါတယ်။	X-Men ပွဲဦးထွက် Godzilla အား ကျော်ဖြတ်
Created: 26 May 2014	by Myanmar News Blog	စိတ်ကူးယဉ် စွမ်းအားရှင် သိပ္ပံဇာတ်ကားများ ဖြစ်တဲ့ X-Men ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် ဇာတ်ကား "X-Men: Days of Future Past" ဟာ ဆိုရင် ပွဲဦးထွက်မှာတင် ဒေါ်လာ 91 မီလီယံ ရရှိခဲ့ပြီး ယင်းမတိုင်မီ ပထမ နေရာ ရယူထားတဲ့ "Godzilla" ဇာတ်ကားရဲ့ 31.4 မီလီယံ ကို ကျော်ဖြတ် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရက်သတ္တပတ် ကုန်ဆုံးချိန်မှာ ဒေါ်လာ ၁၁၀ မီလီယံ ရရှိ ဖို့လည်း မျှော်မှန်း ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။	ရေဘဝဲပုံစံ စက်ရုပ် ဖုန်စုပ်စက်
Created: 24 May 2014	by Myanmar News Blog	အသက် (၂၁) သာ ရှိသေးတဲ့ တူရကီ နိုင်ငံသူ တစ်ယောက် ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ ဖုန်စုပ်စက် တစ်ခုပါပဲ။ ဒီရေဘဝဲ ပုံစံ ဖုန်စုပ်စက်ဟာ ဆိုရင် မိမိ နေထိုင်ရာ နေရာရဲ့ ဆိုဖာတွေ၊ ခန်းစီးတွေ အထိပါ တွယ်တက်ပြီး သန့်ရှင်းရေး လုပ်စေနိုင်ပါသတဲ့။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့်တော့ ယူရို ၅၀၀၀ ကျသင့်ပါလိမ့်မယ်။	နှစ်ပေါင်း (၄၀) နီးပါး တစ်နေ့ (၈) မိုင်အားနဲ့ ပြေးလွှားခဲ့သူ
Created: 22 May 2014	by Myanmar News Blog	မီယာမီ ကမ်းခြေ နေထိုင်သူ တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဒီလူသား ဟာ ဆိုရင် ဘယ်လိုမှ ခရီး မထွက်ခဲ့ပါဘူး။ ယုတ်စွအဆုံး ဒီလူသား ဆီမှာ ကား လိုင်စင် ဆိုတာတောင် ရှိမနေ ခဲ့ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် (၄၀) အတွင်းမှာ လည်းပဲ ဖလော်ရီဒါနယ် ကို စွန့်ခွာ ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီလူသား ဟာ ဆိုရင် နှစ်ပေါင်း (၄၀) နီးပါး တစ်နေ့ကို (၈) မိုင်နှုန်းနဲ့ ပြေးလွှား ခဲ့သူ တစ်ဦးသာ ဖြစ်ပါတော့တယ်။	Batman နှင့် Superman ပူးပေါင်းမည့် ဇာတ်ကား
Created: 22 May 2014	by Myanmar News Blog	မေလ ၂၁ ရက်နေ့က Batman နှင့် Superman တို့ ပူးတွဲ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ကြမည့် "Batman Vs Superman - Dawn of justice" အား အတည်ပြုလိုက်ပြီး ယခုအခါ စတင် ရိုက်ကူးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။	(၁၀) နှစ်ကြာ ပုံဖော်ခဲ့ရသည့် ခြံစောင့်နဂါးကြီး
Created: 22 May 2014	by Myanmar News Blog	ဥယာဉ်မှူး အဖိုးကြီး John Brooker ဟာ ဆိုရင် ခြံစည်းရိုး သစ်ပင်တွေကို နဂါးပုံ ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို နဂါးကြီးပုံ ကို ဖော်ခဲ့ရာမှာ (၁၀) နှစ် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး နဂါးကြီးဟာ အရှည် ပေ (၁၀၀)၊ အမြင့် ပေ (၂၀) ရှိပါတယ်။ ဒီနဂါးကြီး ကိုတော့ ကပ်ကြေး တစ်လက်နဲ့ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ဧရာမ ခြံစောင့်ကြီး လို့သာ ဆိုချင်ပါတော့တယ်။	Microsoft မှ Surface Pro3ကို ပြသ
Created: 22 May 2014	by Myanmar News Blog	၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလ၊ ၂၀ ရက်နေ့က နယူးယောက်မြို့မှာ Microsoft မှ ၎င်းတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန် အသစ် ဖြစ်တဲ့ Surface Pro3ကို ပြသ ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအသစ် ဟာ ဆိုရင် အရင် ဗားရှင်း ထက် ပိုမို ပါးလွှာပြီး ပိုမို ပေါ့ပေါ့ လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီထက် Surface Pro3ဟာ ဆိုရင် Laptop များရဲ့ နေရာမှာ အစားထိုးနိုင် စေရန် ဒီဇိုင်း တည်ဆောက် ထားခြင်း ဖြစ်တယ် လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ Surface Pro3ကိုတော့ ဈေးနှုန်း ၇၇၉ ဒေါ်လာနဲ့ ရောင်းချ သွားမှာ လို့လည်း သိရပါတယ်။	ပျိုပျိုလား၊ အိုအိုလား မေးတော့မယ့် Facebook ရဲ့ Ask Button
Created: 21 May 2014	by Myanmar News Blog	Facebook ဟာ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ Relationship Status ကို စပ်စုနိုင်ဖို့အတွက် Ask Button ကို ထည့်သွင်းတော့မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။	မြင်းရုပ်ကြီး ဟိုတယ်
Created: 21 May 2014	by Myanmar News Blog	ကမ္ဘာ့သမိုင်း စာမျက်နှာထက်မှာ အထင်အရှား နေရာယူထားတဲ့ မြင်းရုပ်ကြီး တစ်ရုပ် ရှိပါတယ်။ ဒီသမိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရုပ်ရှင်တွေလည်း ရိုက်ကူးထားပြီးပါပြီ။ ဒီမြင်းရုပ်ကြီးကတော့ Trojan မြင်းရုပ်ကြီးပါပဲ။ ယခုလည်း ဘယ်လ်ဂျီယံ နိုင်ငံမှာ ဒီမြင်းရုပ်ကြီးကို တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ဘာအတွက်လဲ ဆိုတော့ ဟိုတယ် အတွက်ပါ။ ဒီဟိုတယ် မြင်းရုပ်ကြီးထဲမှာ ဆိုရင် သဘာဝထွက် ပစ္စည်း အများစုနဲ့ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ဟိုတယ် တည်းခိုခ အနေနဲ့ကတော့ ယူရို ၁၂၂ ပေးရပါလိမ့်မယ်။ အချို့အချို့ကတော့ သဘာဝ ပစ္စည်းတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားနဲ့ မြင်းရုပ်ကြီး ဟိုတယ်ကို ဖိအားများစွာဖြင့် ပြည့်နှက်နေတဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှ လွတ်မြောက်ရာ နေရာလေး တစ်ခုပါပဲရယ်လို့ ချီးမွမ်းထောပနာ ပြုသွားကြပါသေးတယ်။	ရာသီဥတုရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုဟာ ကျွန်ုပ်တို့ မနက်စာ များကို ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်
Created: 21 May 2014	by Myanmar News Blog	မိုးခေါင် ရေရှားမှု၊ ရေကြီး ရေလွှမ်းမှု စတဲ့ ရာသီဥတုရဲ့ ထိုးနှက်မှုတွေဟာ တစ်စထက် တစ်စ ဆိုးရွားလို့ လာခဲ့ပါတယ်။ Oxfam ရဲ့ အစီရင်ခံစာ အရဆိုရင် ဒီလို ဆိုးရွားလာတဲ့ ရာသီဥတုကြောင့် အဓိက စားသောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့ ဂျုံ၊ ဆန် စတာတွေရဲ့ ဈေးနှုန်းဟာဆိုရင် လာမယ့် ၂၀၃၀ ခုနှစ်မှာ လက်ရှိဈေးထက် ၂ ဆ ခုန်တက်သွားနိုင်ပါသတဲ့။ ဒါကြောင့်ပဲ မနက်ပိုင်းမှာ ဂျုံ၊ ဆန် နဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ စားသောက်ကုန်ကိုမှ စားသုံးလိုကြသူများ အနေဖြင့် အခက်တွေ့နိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။	မျောက်ဝံ တစ်ကောင်ရဲ့ ကိုယ်တိုင်ဝတ် အင်္ကျီ
Created: 21 May 2014	by Myanmar News Blog	ကမ္ဘာ့ သတင်း စာမျက်နှာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ DailyMail ဟာဆိုရင် မျောက်ဝံ သားအမိနှစ်ယောက် ပန်းခြံတစ်ခုအတွင်း အစာရှာထွက်ရင်း လူသားတို့ ဝတ်ဆင်ကြတဲ့ အင်္ကျီတစ်ထည်ကို တွေ့မိရာက အစပြုပြီး လူသားနှင့် အနီးစပ်ဆုံး တိရစ္ဆာန် ဖြစ်သည်နှင့် အညီ အဆိုပါ အင်္ကျီကို ကိုယ်တိုင် ဝတ်ဆင်ခဲ့ပုံကို အမိအရ ရိုက်ကူးတင်ပြခဲ့ပါတယ်။	ချစ်စဖွယ်၊ ကြောက်စဖွယ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ လန်ဒန်ပြပွဲ
Created: 19 May 2014	by Myanmar News Blog	ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၇၊ ၁၈ ရက်နေ့တွေက လန်ဒန်မှာ နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့ Pet Show ကို ကျင်းပ ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ အရောင်အသွေး စုံလင်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်တွေထဲမှာ ဆိုရင် ခွေး၊ ကြောင် က အစ ကြွက်၊ ပင့်ကူ၊ ကင်းမြီးကောက် တွေလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။	Myanmars.NET's Facebook Wall - 671956841209d7bfb9086cef2bc48040 - 2014-05-19-09-16-59
Created: 19 May 2014	by Myanmar News Blog	ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုး �www.president-office.gov.mmရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗဟိုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းသည် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့မှ စစ်တွေမြို့သို့ ရောက်ရှိပြီး ရခိုင်...	&#x1019;&#x103c;&#x1014;&#x103a;&#x1019;&#x102c; &#x1010;&#x102d;&#x102f;&#x1004;&#x103a;&#x1038;&#x101b;&#x1004;&#x103a;&#x1038;&#x101e;&#x102c;&#x1038;&#x1019;&#x103b;&a
Created: 19 May 2014	by Myanmar News Blog	မြန်မာ တိုင်းရင်းသားများ အဘိဓာန် -- English - Kachin, Kayah, Kayin (Karen), Chin, Myanmar, Mon, Rakhine, Shan Dictionary (credits) မှတ်ချက်။ တိုင်းရင်းသား ဘာသာအားလုံး စုံလင်အောင် ကြိုးစားလျက် ရှိပါသည်။ ယခု လောလောဆယ်တွင် မြန်မာ၊ ရှမ်း၊ မွန်၊ ချင်းဘာသာများသာ ရှိပါသေးသည်။ အခြား တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အဘိဓာန်များ ရှိပါက ထည့်သွင်းစေလိုလျှင် ကျွန်တော်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပေးပါရန် မေတ္တာ ရပ်ခံ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ht...	Sidebar